Ukuqhutywa kweTrafikhi ekuJolise kuyo ukuNxibelelanisa iNkqubo yokuThengisa
Zuza imali ngaphezulu kwe-100 yotshintshiselwano
Umhla wokuhlawula we-TE-elona shishini lilula liphuhliselwe abatyibilikisi betrafikhi
Sifumana ikhomishini ukuba ucofa eli khonkco kwaye wenze ukuthenga ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo kuwe.
Indawo yokuthengisa yaseBankbank
by UBeverly Omncinci on Julayi 21, 2021
Iindidi ngeendidi zoThengiso oluManyanisiweyo
Ilitye leRosetta Funda iiLwimi ezingenamda | iinyanga ezili-12 - Funda iilwimi ezingama-24 | Ukukhuphela i-PC / Mac / iOS / i-Android
Izibonelelo zentengiso enxulumene nazo ziyacaca ngakumbi namhlanje kunangaphambili. Le yeyona nto iphambili kwisibheno esikhulu seentengiso kunye neenkqubo zokuthengisa phakathi kwamakhulu eengcali zentengiso.
Uninzi lwetekhnoloji ye-intanethi yangoku ikwenzile ukuba abo bathengisayo bakwi-Intanethi bafumane idatha kunye namanani emali abayifumanayo xa bethengisa. Okwangoku kunokwenzeka ukuba kusetyenziswe ishishini elifana ne-PayPal ukulungiselela ukuhlawulwa kunye nokuphathwa kwe-invoyisi. Oku kunqumle kakhulu umzuzu wentengiso ye-intanethi ehambelana nayo ifuna ukuba ilinde intlawulo yayo ukuba iqokelelwe kubathengisi.
Zombini izinxulumani kunye nabathengisi ngokwenyani ngoku bayazi ukuba intengiso yokunxulumana isebenza kubo bobabini. Abathengisi bakuthatha ukuthengisa kunye nentengiso njengethuba lokuthengisa izinto zabo ngexabiso elincinci. Kwelinye icala, abo banxulumana nabo babona intengiso kunye nokuthengisa njengeendlela ezichanekileyo zokufumana ingeniso kwi-intanethi ngokwenza into abayithandayo, eyintengiso ye-intanethi.
Ngokulinganayo njengoko isibheno sentengiso ehambelana nayo kunye nokuthengisa sele kungene kudrive, ngokufanayo ulindelo lwabantu litshintshe ilungelo ngokubhekisele kwintengiso kunye nentengiso. Intengiso enxulumene nayo ayisacingelwa njengendlela eyongezelelweyo yentengiso ngabathengisi, okanye njengesixhobo esongezelelweyo sengeniso ngumthengisi onxulumene naye kwi-Intanethi. Abahlobo kunye nabathengisi ngokufanayo, intengiso enxulumene nayo ngoku ithathwa njengeyona nto iphambili yomvuzo kunye nengeniso.
Ngokwangoku sifuna ukuphonononga ukuba loluphi uhlobo lwentengiso enxulumene noluza kusebenza ngokukuko kulo naluphi na uhlobo lomntu? Ngaba lukhona uhlobo lokwahlulahlula kwiinkqubo zentengiso ezinxulumene noko?
Ngokwenyani kukho uluhlu lwentengiso enxulumene nayo, kwaye iintlobo ngokuqinisekileyo ziya kuxhomekeka kwindlela onokuthi ubachonge ngayo. Udidi oluphambili lwentengiso kunye neenkqubo zentengiso zehla phantsi kokuhlelwa okungama-2: ukuhlawulwa ngokucofa (PPC), kunye nentlawulo yokusebenza (PPP).
Hlawula Ngokucofa (PPC) -I-PPC lolona hlobo lubalulekileyo lwentengiso enxulumene nabahlobo abanendawo ezincinci, kwaye yeyona ndlela ilula yokwenza imali. Kolu hlobo lokudibanisa, umthengisi uhlawula iqabane lakhe nanini na xa kutyelelwa indawo yakhe website, kukuthi xa umntu ecofa ibhena yomthengisi okanye umyalezo wentengiso.
Hlawula ngokuSebenza (PPP) -Ukuthengisa intengiso ye-PPP kuyaphumelela ngokukuko phakathi kwabathengisi kwaye lolona hlobo lwanelisayo kubahlobo. Kolu hlobo lwenkqubo yokunxulumana, umthengisi ubhatala umlingane kanye xa ingcebiso yakhe iguquka ibe ngumsebenzi-ngalo lonke ixesha undwendwe aluthumele khona ngokwenene luyathenga into kwiwebhusayithi yomthengisi okanye xa undwendwe lwesiza luphela lukhokela. Kwelinye icala, olu hlobo lwentengiso enxibeleleneyo luphela lwanelisa kakhulu kwezoqoqosho, kuba iintlawulo kwintengiso ye-PPP kunye nentengiso zihlala zivela kwi-15% ukuya kwi-20% yentengiso yento yokwenyani.
Intengiso yentsebenzo yentsebenzo enokubakho inokuchongwa nangakumbi kwiindidi ezi-2: intlawulo yentengiso nganye (i-PPS) kunye ne-pay-per-lead (PPL). Zombini ezi zinto zibalasele.
a) Hlawula ngeNtengiso nganye (i-PPS) -Kuhlobo oluthile lwentengiso yentengiso nganye, abathengisi bahlawula amaqabane iindleko ezithile nanini na xa undwendwela indawo echaze iwebhusayithi yomthengisi eneneni efumana into kwiwebhusayithi yomthengisi. Amahlakani ahlawulwa ngokuhlawulelwa, nangona abanye abathengisi banokugqiba ekubeni bahlawule intlawulo elungisiweyo. Akukho ngxaki ukuba siyintoni na isiseko sentlawulo, ihlala inkulu kuneendleko ezihlawulwa kubahlobo kwinkqubo yokunxiba ngokunqakraza-nganye.
Kolu hlobo lwentengiso enxulumene nayo, umlingane uyahlawulwa nanini na xa undwendwela indawo abhekisa kuyo kwiwebhusayithi yomthengisi elayisha uhlobo lwesicelo okanye naluphi na uhlobo lokuthelekiswa okunxulumene nombutho wenkampani. Ngaphandle kwezi ntlobo zintathu zentengiso kunye nentengiso, uninzi lwezinto zentengiso ezinxulumene noko zikhona. Ukuba udidi lusekwe kubunzulu benethiwekhi enxulumene nayo, inokuchongwa njenge-tier eyodwa, ezimbini-tier, kunye nentengiso enxulumene nenqanaba elininzi kunye nentengiso.
ITreyini enye, iTreyini ezimbini, kunye nokuThengisa okuManyeneyo
Ezi ntlobo zinxulumene nentengiso kunye nentengiso zisekwe kwiidigri ezahlukeneyo okanye amaxabiso kwinethiwekhi enxulumene nalapho intlawulo yenziwe.
A) Isilinganiselo esinye - Kwinkqubo yokubhengeza inqanaba elinye, abo banxulumana nabo bahlawulwa ngokusekwe kwintengiso ethe ngqo okanye kwiwebhusayithi yezithuthi Uye wachaza umthengisi. Zonke izinto ezazibonakalisiwe ngaphambili zazintengiso kunye neentengiso (okt i-PPS, i-PPL, kunye ne-PPC) ilahleko phantsi kodidi olunye lwenqanaba elinye.
B) Amanqanaba amabini-Kwiinkqubo ezimbini zokuthengisa ezinxibeleleneyo, abo banxulumana nabo abayisebenzisi nje kuphela ukugcwala kwiwebhusayithi okanye ukuthengisa abathengisela iwebhusayithi yomthengisi, nangona kunjalo ukongeza kuyo yonke indawo yokugcwala kwiwebhusayithi okanye kwintengiso ethunyelwe ngamanye amaqabane asayine. njengonxibelelaniso lwentengiso yentengiso ekwi-intanethi.
C) Uluhlu lweMigangatho emininzi - imisebenzi emininzi yokuthengisa enxulumene nayo ngokufanayo, nangona iqabane lifumana imbuyekezo eyongezelelweyo nangaphezulu kweedigri zonxulumano kumanqanaba ngamanqanaba kwinethiwekhi.
D) Ingeniso yokuHlala yokuNgenisa eshiyekileyo -Kolu hlobo, ukongeza kumvuzo odibeneyo imali kumthengi ngamnye uye wachaza iwebhusayithi yomthengisi, iqabane lihlawulwa ngokungaphezulu ngalo lonke ixesha umthengi athe wabhekisa kuye ubuyela kwiwebhusayithi yomthengisi kunye nokufunyanwa kwento enye. Imbuyekezo yoluhlobo lwentengiso enxulumene nayo isekwe kwiipesenti zentengiso okanye isekwe kulondolozo lwentlawulo.
Wonke umrhwebi onxulumene naye kwi-Intanethi ufumanisa ukuba ezi ndlela zinxulumene nentengiso zisebenza ngeendlela ezahlukeneyo kubo bonke. Intengiso yexabiso elininzi, ekwabizwa ngokuba yiMulti-Level Marketing (MLM) luhlobo olunzima kakhulu lwentengiso yewebhu kwaye ayisebenzi kumntu wonke. Ngapha koko, iingcali ezininzi ezaziwayo zentengiso zicinga nge-MLM njengenqatshelwe okanye into engafunekiyo.
Umrhwebi onxulumene naye kwi-Intanethi kufuneka azame iindlela ezahlukeneyo kunye nokufumanisa ukuba yeyiphi na eya kusebenza kakuhle kuye. Kuya kufuneka emva kojoliso kwezo ndlela zinxulumene nentengiso ezifanelekileyo kuyilo lwenkampani yentengiso yewebhu.
Njengokuba isibheno sentengiso ehambelana nayo kunye nentengiso iye yaya ngqo kwi-overdrive, ngendlela efanayo ulindelo lwabantu luguquke lwangowona ungcono ngokubhekisele kwintengiso kunye nentengiso. Intengiso ehambelanayo kunye nentengiso ayisathathelwa ngqalelo njengesixhobo sesibini sentengiso ngabathengisi, okanye njengesixhobo esongezelelweyo somvuzo ngumntu onxulumene naye kwezentengiso. Abahlobo kunye nabathengisi ngokufanayo, intengiso ehambelana nayo kunye nentengiso kungoku nje kucingelwa njengesixhobo esiphambili sengeniso kunye nengeniso.
Kwelinye icala, olu hlobo lwentengiso enxibeleleneyo lwanelisa ngokwedlulele kumhlobo ozinikeleyo, kwimbuyekezo kwintengiso ye-PPP enxulumene nentengiso ivela ku-15% ukuya kuma-20% wentengiso yokwenene. Ngaphandle kwezi ntlobo zintathu zentengiso enxulumene, uninzi lwezinye iintlobo zentengiso ezinxulumene noko zikhona.
I-Sony A80J 65 Inch TV: I-BRAVIA XR OLED 4K ye-Ultra ye-Smart ye-TV kaGoogle eneDolby Vision HDR kunye ne-Alexa yokuhambelana XR65A80J- 2021 Model
07/24/2021 10:54 am GMT
Inkqubo yoNyango lomoya
Ikhadi lokuthenga ngetyala laseAmazon
Ukuwa kwevenkile Shopify 2021
Ijenereyitha yeSola ePhathekayo
I-WordPress yabasaqalayo ka-2021
Okona kulungileyo ebomini
Yonke kwinzuzo enye
Iqela elisezantsi eliqinisekisiweyo
Amakhaya athengiswayo eIllinois
Yakha iiNgcaciso zam
Umthumeli weeNtengiso waSimahla
Ukuhola kweTrafikhi 2 Ingeniso
VM yomhla wokuhlawula
Uluhlu lokujonga lwe-SEO
Umhla wokuhlawula we-TE
Indawo ekuHanjiswa ngayo iTrafikhi
Inkqubo yokunyanga amanzi
Inkxaso yeWP kwi-Intanethi
Ndingalujolisa njani uTrafikhi kwiBhlog yam?
Amahla ndinyuka okuBhloga kweendwendwe- Yazi ukuba ikunceda njani…
Zininzi iindlela zokujolisa ukugcwala kwiWebhusayithi yakho
Ngaba ufanele uthenge itrafikhi ekujoliswe kuyo?
Ukujolisa kweTrafikhi ngokusebenzisa iMidiya yokuNxibelelana
Iingcebiso eziPhambili ekuJoliseni ukugcwala kweTrafikhi kwishishini lakho le-Intanethi…
Yintoni enokuyenza kuwe kwiiplagi zeWindowsPress?
Ngaba iitemplate zeWordPress kunzima ukuziqonda?
Ufumana njani ukugcwala kweWebhusayithi yakho usebenzisa uTshintshiselwano ngeTrafikhi
Ukujoliswa kweTrafikhi yimfihlo yokuThengiswa okuhle!
Ungazikhetha njani iZibhengezo eziManyeneyo zeSiza sakho
Ndijolise njani kuTrafikhi kwiBhlog yam?
Iindlela ezingakumbi zokuJolisa ukugcwala kwiWebhusayithi yakho
Ulwakhiwo simahla Ukujolisa kweTrafikhi
Iingcebiso eziPhambili zokuJolisa kuTrafikhi kwishishini lakho le-Intanethi…
Izixhobo ekujoliswe kuzo zeNdlela kwiiNkqubo zakho zokuDibanisa
Ilungelo lokushicilela © 2021 · Copyblogger Umxholo womntwana on Isiseko seGenesis · WordPress · Ngema
Masikukhuphele phezulu-Izihlangu zoyilo ngeTwist
Chitha kancinci, amaxabiso asezantsi-Ukufikelela kwiWebhusayithi yeAmazon ngoku
Yonwabela eyona nto ibalaseleyo ebomini - Iimveliso ezikhuselekileyo ezihambelana nendlela yakho yokuphila
Ngokuqhubeka ukhangela indawo ovumelana ngayo nokusebenzisa kwethu ii-cookies